Njirimara na ịma mma nke Montes de Málaga | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, anyị ga-ekwu maka ogige eke nke Ugwu nke Malaga. Ọ bụ usoro ugwu nke usoro Penibético. Ogologo ugwu kachasị elu bụ ihe dịka mita 1031. Imirikiti ókèala ahụ (ọkachasị 97%) bụ nke obodo Malaga. A maara nke ọma na Montes de Málaga maka akụ na ụba nke ahịhịa na anụmanụ yana a na-agakarị ya maka njem, ịgagharị na ịma ụlọikwuu nke ụdị dị iche iche.
N'isiokwu a anyị ga-akọwa n'ụzọ miri emi ihe niile ị nwere ike ịchọta na Montes de Málaga na mkpa ọ nwere.
2 Akụkọ banyere Ugwu Malaga
4 Mma nke Ugwu Malaga
97% nke ókèala ugwu ndị a bụ nke Malaga. Nke ọzọ 3% bụ nke Casabermeja. Ihe omumu banyere ala ya bu nke ejiri okwute mee ya na metamorphism na adighi ike. Ihe akpọrọ “Malaquide cover” bụ nke dị n’elu mkpụrụ na enweghị metamorphism ọ bụla.
Montes de Málaga bụ ebe obibi mmiri 5 akọwapụtara nke ọma. Anyị na-ahụ ụtụ nke osimiri Guadalmedina ndị bụ:
Iyi nke ehi
N'ime usoro ọmụmụ mmiri ndị a, anyị na-ahụ ọchịchị dị egwu. Nke ahụ bụ, ha na-enwekarị ike ime ihe ike ma naanị mgbe mmiri na-ezo. Na mpaghara Malaga dum, mmiri ozuzo na-adịkarị ụkọ ma ọ na-aba ụba. Nke a na - eme ka osimiri na - asọ ụdị mmiri a na - asọ. Onwere ebe ana ejigide obe nke ebum n’uche ya bu ka o kwusi onodu mbuze. M mbuze a na-ewere ọnọdụ mgbe ọbụla oke mmiri zoro. Ihe karịrị ọkara nke ọhịa a na-apụ n'anya ka oge na-aga kemgbe Alaeze Ukwu Rom kwụsịrị.
Enwere data nke gosipụtara ịdị adị nke ọrụ Mozarabic na oge ndị Alakụba. Ebi ubi vaịn, ala ahịhịa na osisi gbara gburugburu ebe ndị a.
Akụkọ banyere Ugwu Malaga
Ugwu ndị dịkarịrị nso na isi obodo ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ nweghị onye bi na ha ma nwee ike ịhụ nnukwu oghere ndị dị n'akụkụ ala ugwu, yana ụlọ a beeụ na osisi chestnut arụnyere na mpaghara ndị a na-akọghị.
Mmanụ aeyụ bụ otu n’ime ihe ụtọ dị oke ọnụ ahịa oge ahụ, yabụ iji ya dị mkpa. Mkpụrụ fig a mịrị amị dịkwa ezigbo mkpa ma na-achọsi ike n'oge ahụ na mkpụrụ vaịn dị n'azụ. N'ihi ọnọdụ ndị ugwu a nwere, enwere ọtụtụ obodo gafere mpaghara a. Ihe odide kacha ochie enwere site na XNUMXst narị afọ ma ọ bụ mpaghara jupụtara na isi iyi, oke ọhịa na mbara ala.
N’akụkọ ihe mere eme, enwere ike ịhụ na ụgbọ njem ụgbọ mmiri siri ike sitere na Spain gaa Italytali na-eji ụgbọ mmiri ebu ebu n’otu ụsọ mmiri ejiri osisi sitere na mba ahụ rụọ. E bugara ọtụtụ mmanya, mmanụ oliv na ọka wit na ala ndị Italia. Andalusia bụ naanị ebe ọla, osisi, mmiri ara ehi, ọka na mmanụ a honeyụ bara ụba. Chụ nta maka ọtụtụ ụdị egwuregwu dịkwa ọtụtụ. Nke a bụ otu n'ime ihe kpatara ọtụtụ ndị mwakpo abịawo ebe a. Akụrụngwa na ịchụ nta.
Osisi kacha sie ike bụ oke ọhịa. Anyị na-achọta ọtụtụ ihe atụ nke pine Aleppo, yana ụfọdụ ihe ọkụkụ nke ahịhịa Quercus na mmebi emebi. Obere mmiri ozuzo anaghị ekwe ka ọtụtụ ahịhịa na-eto.
Achọpụtala ihe dị ka ụdị 182 n'ọmụmụ ihe ụfọdụ na ihe ndị dị ndụ dị iche iche nke sitere na osisi nwere mgbọrọgwụ, ahịhịa, akwụkwọ na okooko osisi. Umu anumanu nke anyi choputara bu: Aleppo pine na pine okwute, akpu holm, osisi junipa, akpu oku, osisi almọnd, carob, oliv olive, oleander na nkwụ. Ndị a bụ ụdị osisi osisi ndị a na - apụtakarị nke anyị na - ahụ.
N'aka nke ozo, anyi nwere ahihia ahihia nke anyi nwere ike ichota umu: rockrose, steppe, thyme, sarsaparilla, rosemary, asparagus, mastic, lavender, bramble, jaguars, n'etiti ndị ọzọ.
Ekwuputara ya ogige puru iche na 1989 ma puta na Iwu Analic Spaces Na-echebe Andalusian. Justbọchị ole na ole ka e bipụtachara ya na BOJA, ọ tara ahụhụ site na nnukwute ọkụ nke tinyere izi ezi ya dum egwu. Ihe kariri hekta 30 gbara ihe kariri 50.000 pine ihe dika ihe dika afo iri ise. Osisi ndị a toro eto ma na-amịpụta ala ọhụrụ.
Banyere anụ ọhịa kachasị elu, anyị na-ahụ ihe karịrị ụdị 161 nke vertebrates. Enwere ụdị azụ 2, mamm 34, 98 nke nnụnụ na 19 nke ihe nākpu akpu. Otu n'ime ihe kachasị mma mgbe anyị na-agafe na Montes de Málaga bụ na anyị jupụtara na ikuku ọhụrụ, ikuku dị iche iche na ụda nke anụmanụ na-enye. Ikuku mmiri na-agwakọta na mmegharị nke osisi na ifuru na-enye ọdịiche zuru oke nke ọkụ a kpochara n'ime ọhịa.
Mma nke Ugwu Malaga
Ihe na-adọta ọtụtụ ugwu ndị a bụ ụzọ ụkwụ na-enyere anyị aka ịpụ na usoro ahụ, mkpọtụ nke ụgbọ ala, mkpọtụ okporo ụzọ na obi ụtọ nke okike. N'ihi ihu igwe nke Malaga, ọnọdụ okpomọkụ na-adịkarị ala n'oge oyi n'agbanyeghị na ọ na-adịtụ ọkụ n'oge ọkọchị. Otú ọ dị, ọ na-eme ka okpomoku zuru oke nwee ike ịnụ ụtọ ọdịdị ala nke ókèala na-enye na ebe magburu onwe ya na mkpokọta na ụda obi ụtọ nke fauna na ikuku n'etiti ahịhịa.
Osisi nke ala dị iche iche enweela ala nke nta nke nta mgbe anyị kwusịrị oke ọkụ ahụ anyị kwuru okwu ya. A na-atụ anya ka ọ gwụchaa nnukwu akụkụ nke mpaghara ahụ mebiri emebi.
Ejila oke anu ulo mara ya. Ofzọ ụmụ anụmanụ isi agafe ebe a dị ụkọ, nke mere na o nwebeghị nke ọ bụla e kere ụzọ maka anụ ụlọ. Ije ije enwere ụzọ ọzọ nke nkwukọrịta nke na-egosi ụzọ ndị njem nleta ga-esi gaa.
Na nchịkọta, a na-eji Montes de Málaga akpọrọ ihe nke ukwuu maka ụba nke ụdị ha na maka ọdịdị ala nke ala. Enwere m olile anya na iji ozi a mee ka ịchọrọ ịga leta mpaghara a na-adọrọ mmasị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ugwu nke Malaga